जुलाई 19, 2017 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments
के Blood Group तपाईको पोल खोल्न सक्छ ? रगत जीवजन्तुहरुको शरीरमा पाइने रातो तरल पदार्थ हो जसले शरीरको कोषहरुमा आवश्यक पदार्थहरु जस्तै पोषक तत्व र अक्सिजन पुराउछ। यो प्लाजमा र रक्त कोषहरुको समिश्रणले बनेको हुन्छ। धमनी नली तथा शिरा नलीमार्फत शरीरमा रगतको संचार हुन्छ। विशेषत: धमनी नलीले मुटुबाट शुद्ध रगत विभिन्न अङ्गहरूमा पुराउछ भने शिरा नलीले अशुद्ध रगतलाई मुटुसम्म पुराउछ।
मानव शरीरको कुल वजनको ७% मात्र रगत हुन्छ। मानव शरीरमा औसत ५.५ लीटर रगत हुन्छ। प्लाज तथा विभिन्न रक्तकोषहरु जस्तै, रातो रक्तकोष, स्वत रक्तकोष, प्लेटलेटस् मिलेर रगत बनेको हुन्छ। रगतमा प्लाज्मा ५४.३%, रातो रक्तकोषहरु ४५% र सेतो रक्तकोष ०.७% को मात्रामा हुन्छ।
तपाईंलाई आफ्नो कुनै साथीको मानिसको बानीको बारेमा थाहा पाउन चाहानुहुन्छ? यदी चाहानु हुन्छ भने तपाई आफ्नो साथीको रगत समुह पत्ता लगाएर जानकारी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। Japanese Institute ले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार मानिसहरुको रगत समुह अनुसार उसको चालचलनको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ र रगत समुह फरक भएमा मानिसको विचार र बानी फरक हुने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। यहाँ रगत समुह सँग सम्बन्धित केही बानीको बारेमा दिईएको छ।
क) Group O
संसारका सवैभन्दा बढी मानिसमा यो रगत समुह पाइन्छ। o- र o+ गरी करीब ४७ प्रतिशत मानिसमा यो रगत समुह रहेको हुन्छ जसमा ४० प्रतिशत जती ०+ र ७ प्रतिशत जतीमा o- रहेको हुन्छ। यो रगत समुहका मानिसहरु नेतृत्व गर्न चाहना राख्ने तथा क्षमता भएका, आफुले शुरु गरेको काम फत्ते गरी छाड्ने, सत्यतामा विश्वाश गर्ने, मायालु र आत्म-विश्वाशले भरिएका हुन्छन भने यो रगत समुह भएका मानिसहरुको कमजोरी भनेको डाहा गर्ने बानी र धेरै प्रतिष्पर्धात्मक हुन खोज्ने भएको अनुसन्धानको क्रममा पाईएको थियो।
ख) Group A
ग) Group B
घ) Group AB
← कुखुरी पहिला कि अण्डा ? यस्तो छ वैज्ञानिकहरुकाे उत्तर
नीति अनुसार के कुरा व्यर्थ हो ? →
अप्रील 4, 2016 साइन्स इन्फोटेक 2